musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kushungurudzika nemitemo yekufamba inokura
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vanhu vari kuwedzera kushungurudzika neiyo COVID-19 zvirambidzo zvekufamba uye kunyange zvakanyanya vakaona hupenyu hwavo kutambura semhedzisiro.
67% yevaongorori vakapindura vakafunga kuti miganho yenyika zhinji inofanirwa kuvhurwa izvozvi, kumusoro kwe12 muzana-mapoinzi kubva kuongororo yaJune 2021.
64% yevakabvunzurudzwa vakapindura vakafunga kuti kuvharwa kwemuganhu hakuna basa uye kwanga kusiri kushanda mukubata hutachiona (kukwira gumi muzana muzana kubva muna Chikumi 11).
73% vakapindura kuti hupenyu hwavo huri kutambura semhedzisiro ye COVID-19 zvirambidzo zvekufamba (kumusoro kwe6 muzana mapoinzi kubva muna Chikumi 2021).
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakashuma kuti vafambi vemhepo vari kuwedzera kushungurudzika nezvirambidzo zvekufamba kweCOVID-19. Ongororo yakapihwa neIATA yevanhu mazana mana nemazana manomwe vakapindura mumisika gumi nemana muna Gunyana yakaratidza chivimbo chekuti njodzi dzeCOVID-4,700 dzinogona kutarisirwa nemazvo uye kuti rusununguko rwekufamba runofanira kudzoserwa.
67% yevakabvunzwa vakafunga kuti miganho yenyika zhinji inofanira kuvhurwa izvozvi, kumusoro kwe12 muzana-mapoinzi kubva kuongororo yaJune 2021.
64% yevakabvunzwa vakafunga kuti kuvharwa kwemuganhu hakuna basa uye kwanga kusiri kushanda mukubata hutachiona (kukwira gumi muzana muzana kubva muna Chikumi 11).
“Vanhu vari kuwedzera kushungurudzika ne Mitemo pakushanya nekuda kwecovid-19 uye zvakanyanya vakaona hupenyu hwavo kutambura semhedzisiro. Ivo havaone kukosha kwekudzivirira kwekufamba kudzora hutachiona. Uye varasikirwa nenguva dzakawandisa dzemhuri, mikana yekuvandudza wega uye zvakakosha zvebhizinesi. Muchidimbu, ivo vanopotsa rusununguko rwekubhururuka uye vanoda kuti idzorerwe. Meseji yavari kutumira kuhurumende ndeiyi: COVID-19 haisi kuzonyangarika, saka tinofanira kugadzira nzira yekugadzirisa njodzi dzayo tichigara nekufamba zvakanaka, "akadaro Willie Walsh, Iată'' Director General.
Tsigiro inokura yekuyedzwa kana kubaiwa nhomba kutsiva kwega
Chinhu chikuru chinodzivisa kufamba nendege kunoenderera mberi nekuva nhanho dzekuparadzanisa vanhu. 84% yevakabvunzwa vakaratidza kuti havazofamba kana paine mukana wekuparadzaniswa nekwavo kwavanosvika. Chikamu chiri kukura chevakabvunzwa chinotsigira kubviswa kwevarandi kana:
Munhu akaedza zvisina kunaka nezve COVID-19 (73% munaGunyana ichienzaniswa ne67% muna Chikumi)
Munhu akabayiwa jekiseni (71% munaGunyana zvichienzaniswa ne68% muna Chikumi).